Kwidziridzo ichagadzirisa Apple Music rwiyo kubviswa. | IPhone nhau
Apo vamwe vedu pavakaverenga kunyunyuta kwekutanga kwemushandisi akataura izvozvo Apple Music ndakava naye akadzima raibhurari yake yese yemimhanzi, Tinosuwa. Pamusoro pezvo, vamwe vaiti Apple yaida kubvisa mimhanzi isina DRM kuti ishandure yega nekudzivirira, chinhu chatakaziva kubva pakutanga kuti zvaisazove zvakadaro. Apple yakashamisikawo, zvekuti, pakudzidza, yakaedza kubereka iyo bug pasina kubudirira.
Nhau dzakanaka ndedzekuti Tim Cook nekambani vakatosimbisa zvinhu zviviri: yekutanga ndeyekuti hongu, izvo «nhamba diki kwazvo»Yevashandisi veApple Music vaona mafaera avo achibviswa mumakomputa avo pasina mvumo. Chinhu chechipiri chavakasimbisa, uye ichi ndicho chinhu chakanaka (chekutanga kwete, hongu), ndechekuti pakutanga kwesvondo rinouya ichaburitsa vhezheni itsva yeTunes «izvo zvinosanganisira zvekuwedzera matanho ekuchengetedza«, Izvo zvinofanirwa kuona kuti dambudziko rave nemukurumbira mumazuva apfuura harifanirwe kukanganisa vanhu vazhinji.
Kugadziridzwa kweTunes kunodzivirira kubviswa kweApple Music mafaera
Apple yakataura naJim Dalrymple weThe Loop ndokutsanangura kuti, kusvika panguva iyoyo, mushandisi mumwe chete ndiye akange atumira nyaya nezvekuti Apple Music yakabvisa sei mafaera kubva pakombuta. pasina mvumo yako. Avo vedu vanga vachishandisa zvigadzirwa zveApple uye software kwenguva yakareba vanofunga kuti izvo zvakaitika hazvaigona kuitika dai kukanganisa kwevanhu kwanga kusati kwapinda muchiitiko ichi, asi Apple yakatosimbisa kuti inoziva dambudziko rekutanga iri nevamwe vanovimbisawo kuti zvakaitika kwavari zvakaitika zvakafanana.
Dambudziko nderekuti muCupertino hauna kukwanisa kubereka iyo bug. Ndine mibvunzo miviri yasara: yekutanga ndiyo ichaitika mune zviitiko apo mushandisi akarasa mafaera asina DRM uye asina backup. Will Apple ichakubvumidza iwe kurodha nziyo idzi mahara kubva kuTunes? Yechipiri iri nyore: ivo vachakwanisa kudzivisa kubviswa mune ramangwana neshanduro nyowani yeTunes?
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Apple zvigadzirwa » Apple Inosimbisa Yakakanganisika Rwiyo Kubviswa kubva kuApple Music; kururamisa munzira
Sharp inotanga kugadzirisa zvakare zvichitevera kuwanikwa kwayo naFoxconn